पर्सि अर्थात फागुन १ गते सूर्यले आफ्नो राशी परिवर्तन गर्दै, यी राशिलाई हुनेछ फाइदा!
माघ २८, २०७६ SG
फागुन १ गते अर्थात् १३ फेब्रुअरीमा सूर्य ग्रह कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्दैछ । यस राशिमा सूर्य १४ मार्चसम्म स्थित रहनेछ, त्यसपछि यस ग्रहले मिन राशिमा प्रवेश गर्नेछ । कुम्भ शनि ग्रहको राशि हो । जबकि शनि र सूर्यमा शत्रुताको भाव रहेको छ । सूर्यको यस गोचरको प्रभाव सबै राशीमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रुपमा पर्छ । जान्नुहोस्, सुर्यको राशी परिवर्तनले कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ ?
आम्दानी बढ्नेछ, लाभको स्रोत वृद्दि हुनेछ । शासन-प्रशासन कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अफिसमा तारिफ प्राप्त हुनेछ । व्यापारमा लाभ हुनेछ । विधार्थीलाई शिक्षा सम्बन्धित क्षेत्रमा राम्रो परिणाम मिल्नेछ । सन्तानको सुख मिल्नेछ ।
पेसामा सफलता मिल्नेछ । तपाईको प्रभाव बढ्नेछ र मान सम्मानका साथै कार्य क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने मौका मिल्न सक्छ । तपाईले पदोन्नति र तलब वृद्दि भएको संकेत पाउनुहुनेछ ।
सामाजिक जीवन निकै राम्रो हुनेछ । मान-सम्मान बढ्नेछ । तपाईको धन र धान्यको लाभ हुनेछ र कार्यमा सफलताको आत्मविश्वास रहनेछ । सरकारी क्षेत्रबाट उत्तम लाभको योग बन्नेछ ।
तपाईलाई पैतृक सम्पत्ति प्राप्त होला। तपाईको पिताको स्वास्थ्य निकै खराब हुन सक्छ । जो कानूनको विरुद्ध हुन्छ, त्यसलाई तपाईले प्रशासनको तर्फबाट दण्डित गर्नुहुनेछ ।
तपाईको स्वास्थ्यमा पहिलाभन्दा सुधार हुनेछ। पुरानो कुनै स्वास्थ्य समस्याबाट राहत अनुभव गर्नुहुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा केहि समस्या आउनेछ ।
तपाई विभिन्न प्रकारको कोर्ट सम्बन्धि मामलामा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ र तपाई आफ्नो विरोधिलाई हराउनुहुनेछ । तपाईको आवश्यक खर्च हुन्छ, त्यसैले आर्थिक स्थिति बलियो हुनेछ ।
शासन-प्रशासनबाट लाभ मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको लागि पनि यो गोचर अनुकूलता लिएर आउनेछ । यधपी केहि मान्छेलाई यसै क्रममा असामयिक समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ।
तपाईको परिवारमा विशेष तनावको सामना गर्नुपर्नेछ । तपाईभित्र अहम भावना जागनेछ । तपाई परिवारमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
तपाईको भाग्य वृद्दि हुनेछ। तपाईको सबै काम बन्नेछ, जसबाट तपाईलाई लाभ पनि हुनेछ । यसैक्रममा तपाई कुनै तीर्थ यात्रा पनि जानुहुनेछ । यात्रामा तपाई शान्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ ।
आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला । अचानक धन प्राप्ति हुनाले तपाईको मन प्रफुल्लित हुनेछ। तपाईले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नुहुनेछ । केहि मान्छेलाई आफ्नो ससुराली पक्षबाट राम्रो नतिजा मिल्नेछ र कुनै प्रकारको आर्थिक मदत मिल्नेछ ।
आत्मविश्वास बढ्नेछ । साथै अहम भावना पनि बढ्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा यस इस गोचरको असर नकारात्मक रूपबाट हुन सक्छ ।
खर्च बढ्न सक्छ । केहि मान्छे विदेश जान सफल हुनेछन् । तपाई आफ्नो विरोधि प्रति सावधान रहनुहोला ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, माघ २८, २०७६१२:३६
नयाँ साल २०७७ कुन राशिको लागि कति शुभ ? हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल !